Eminye imishini yokuphakamisa, i-Cleeper Creeper & Shop Products | Endont jack
Ikhaya > Imikhiqizo > Eminye imishini yokuphakamisa
Ukuphakama kwe-Creeper yemoto kuphansi, okuqinisekisa amandla ayo we-Great Traffic futhi kungadlula kalula phansi kwemoto. Ilungele cishe zonke izinhlobo zezimoto futhi ayikwazi ukusetshenziswa kwasendlini kuphela, kodwa futhi nezitolo ezingama-4S.
Uhlaka lwe-creeper yemoto lwenziwe ngamapayipi e-Iron, angathwala isisindo esiphezulu sama-lbs angama-300 futhi singasetshenziswa yindoda yabantu abadala elele kukho. Ingaphezulu lepayipi lensimbi limbozwe ngopende, okungavimbela ukugqwala futhi kukhuphule impilo yenkonzo.
Kunamasondo ayisithupha we-Universal ezansi kwemoto ye-Creeper evumelana nezimo neselula. Ungalawula i-Cleeper yemoto ukubheka wonke amagumbi e-Car Chassis ngaphandle kokushiya noma iyiphi indawo yokuphepha.
Le shini yezitolo yenzelwe ukuqondisa, ukugoqa, ukucindezela, nokunyathela.
Umbukiso wesampula we-jack
Umbukiso wesampula kaJack.Imikhiqizo yethu idlulise i-CE, isitifiketi se-GS & TUV se-European Union. Izinga lemikhiqizo yethu liyiqiniso futhi lithembekile. Bathengiswa kahle ezimakethe zaseYurophu naseMelika. Yonke imikhiqizo yamukele umdwebo wokuvikelwa kwemvelo nge-electrostal kanye ne - 45 ° hydraulic uwoyela, ngakho-ke ingasetshenziswa ezindaweni ezibandayo kakhulu. Sicela uthembele e-US ePont. Uma sikhetha i-EPONT, sizoqhubeka nokwenza kangcono futhi sibe ngcono
Abanye abakhiqizi abasebenza ngokwezifiso abakwa-China abavela eChina